Ciyaaryahan Media – Category – Windows – Vessoft
Ciyaaryahan Media – Windows
Ciyaaryahan Media Streaming video Tool si loogu badalo your computer galay xarunta warbaahinta ama tiyaatarka guriga. Software wuxuu taageeraa gacanta laga hago oo kuu ogolaanaya in aad ku xidhi daro ah.
العربية, English, Українська, Français... Nata Player 4.15
English, Українська, Français, Deutsch... BS.Player 2.70
العربية, English, Українська, Français... KMPlayer 4.1.3.3
العربية, English, Українська, Français... AIMP 4.11.1841
العربية, English, Українська, Français... GOM Media Player 2.2.77.5240, 2.2.69.5228 iyo 2.2.73.5235
Ciyaaryahan Media ciyaaryahan warbaahinta caanka ah ayaa la sifooyinka sare ee goob. software The taageertaa qaabab badan Cinwaan iyo helayo codecs maqan ee internet-ka.
English, Español, 中文, 日本語... RealPlayer Cloud 17.0.15.10
Ciyaaryahan Media ciyaaryahan warbaahinta la taageero ka qaabab loo jecel yahay. software The kuu ogolaanayaa inaad ku darto files in ay kaydinta daruur oo iyaga u arkaan on the qalab kala duwan.
English, Français, Español, Deutsch... Quicktime 7.6
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka ka Apple inuu u ciyaaro files audio iyo video. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u aragto video qulqulaya, iyo astaysto oo tayo leh loo maqli karo ee daayey.
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka ayaa warbaahinta caanka ah oo taageero ka helaya goobaha kala duwan ee loo maqli file tayo-sare leh. Sidoo kale software awood u arki doona faylasha si buuxda ma ku raran ama u kharribmay.
العربية, English, Українська, Français... Spotify 1.0.38.171
العربية, English, Українська, Français... MP4 Player 3.16.15
Ciyaaryahan Media ciyaaryahan warbaahinta la set oo ah hawlaha aasaasiga ah. software wuxuu taageeraa subtitles, oo search of content on YouTube oo loo maqli karo ee SHOUTcast durdurro leh.
العربية, English, Українська, Français... PotPlayer 1.6.55390 iyo 1.6.55584 beta
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka functional inuu u ciyaaro files warbaahinta. software The taageertaa qaabab loo jecel yahay oo kuu ogolaanaya in aad soo saaro track maqal ah ka files video.
English, Українська, Español, 中文... DivX 10.3.1
Ciyaaryahan Media Converters Video Codecs The set xirmo si xor ah u shaqeeyaan codecs iyo video files. Software wuxuu isticmaalaa in tiknoolijiyada ay ugu caleenta files warbaahinta la riixo heerka sare.
English, Français, Español, Deutsch... MediaMonkey 4.1.14.1813
Ciyaaryahan Media Qalabyada ciyaaro files audio iyo maareeyo ururiyay oo files warbaahinta. Software The kuu ogolaanayaa inaad si loogu badalo files warbaahinta in qaabab kala duwan iyo edit macluumaadka iyaga ku saabsan.
العربية, English, Українська, Français... foobar2000 1.3.12
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka multimedia ayaa la tiro balaadhan oo ah qalab waxtar leh. Software wuxuu taageeraa loo maqli karo ee ugu musuq-files warbaahinta, goobaha la fidiyey ee subtitles iyo qaabeynta ah faylasha video.
English, Français, Español, Deutsch... SMPlayer 16.9
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka MFT in loo maqli karo audio iyo video files leh taageero u qaabab casri ah oo aan baahida loo qabo in download codecs dheeraad ah.
العربية, English, Українська, Français... BearShare 12.0.0.135802
Ciyaaryahan Media The qaybsiga software file inay dalka baadhaan oo soo bixi files warbaahinta. Software ka kooban yahay ah search engine awood badan si aad u hesho faylasha loo baahdo.
Ciyaaryahan Media Software inuu u ciyaaro ee jaanta, xayasiiska iyo saamaynta dhawaaqa. Sidoo kale software awood u u ciyaaro audio raad badan.
English, Français, Español, Deutsch... KaraFun Player 2.3
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka ayaa si tiraa songs karaoke of noocyo kala duwan. software The awoodo si ay ula qabsadaan faraxa, Isbadalo, vocals iyo indices kale oo isugu darey muusikada.